Amathiphu Wokuthatha izithombe Zasendlebeni Aphakathi nendawo - uLucidPix
Kulabo asevele bakhethe ikhamera izikhathi ezingaphezu kwezimbalwa, kunamathuluzi amasha ambalwa okungenzeka ukuthi awuphuthelwa ukukusiza ngohambo lwakho lwezilwane zasendle. Izinto ezinjenge-F-stop, ukujula kwenkundla, ne-ISO yizilungiselelo ezibalulekile ezingaba sína ekhonweni lakho lokuthatha isithombe esihle, ngaphezulu kwamanye amaqhinga ongawasebenzisa njengokufakwa kwekhamera, izingelosi, nokufakwa kwezihloko okufanele. Lezi zonke izinto eziwela ekuqondeni kwe-Intermediate Wildlife Photography.
Amakhamera amaningi edijithali anikezela ngengcebo yezilungiselelo zokubanjwa kwesithombe. Unamandla okulawula isivinini se-shutter, ukujula kwenkambu, ne-ISO. Zonke lezi zinto eziyizimpahla ezinkulu kumthwebuli zithombe ziqinisekisa ukuthi isithombe sazo siphelele ngokuphelele.
Ijubane le-Shutter lisetshenziselwa ukunquma ukuthi ikhamera iveza isikhathi eside kangakanani inzwa yesithombe. Ijubane le-shutter ephezulu lisetshenziswa kangcono ekukhanyisweni okukhanyayo ukumisa ukunyakaza nokuqopha umzuzu oqondile ngesikhathi. Izimo ezihlomula ngejubane elikhulu lokuvalwa kwe-shutter zifaka izithombe zezemidlalo nezithombe zezingane ezincane, ngoba zingenakubonakala sengathi zihlala zithulile. Khumbula, lapho ijubane le-shutter lincane kakhulu ukukhanya kufinyelela inzwa yekhamera. Qiniseka ukuthi isifundo sikhanyiswe kahle, ngaphandle kwalokho ikhamera yakho ingazama futhi inxephezele ukungathathelwa isikhathi ngokwandisa i-ISO, okungangeza umsindo esithombeni sakho, noma ukuvula i-aperture, okungakubangela ukuthi ulahlekelwe iphuzu lakho lokugxila.
Ngakolunye uhlangothi, isivinini sokuvala esisheshayo singasetshenziswa ukukhulisa ukuhamba noma isenzo, ngokuvumela izinto ezihamba ngokushesha ukuba zifiphale. Lokhu kusiza kakhulu lapho kudutshulwa izigcawu ezithile lapho ufuna izinto ezihamba kancane ezithathwa ngokusobala, kuyilapho ezihamba ngokushesha zifiphele kusuka ekunyakazeni, njengamasondo ahamba ngemoto ngesikhathi somjaho noma i-bat swing at a baseball. Ngejubane elifanele le-shutter, ungayibamba imoto / ibhethri ngokucacile nangokukhanya, ngenkathi uvumela amasondo / i-bat ukukhombisa ukufiphala okunyakazayo, ukwengeza isenzo esithombeni esisesinye.
Ukudepha kwenkundla yikho ngempela njengoba kuzwakala, inani lokujula ofuna ukuba nakho emfanekisweni. Kusho ukuthi ungakanani isithombe ofuna ukugxila kuso isithombe. Ezinye izithombe zidinga isizinda sokufiphala nencazelo ephezulu yokugxila endabeni, ezinye zidinga ukugxila kuso sonke isithombe nokujula kwenkambu ebanzi kakhulu. Kuyindaba yokuthi ufunani nokuthi yini ebukeka kahle kakhulu esifundweni sakho. Izilungiselelo eziphezulu zokufaka / i-F-stop zenza okuningi kwesithombe kugxilwe kepha kuvule ukukhanya kwenzwa yekhamera, kuyilapho ukuthambisa okungaphansi / F-eyeka kufiphaza ingemuva kakhulu ngenkathi kuvumela ukukhanya okuningi ukufinyelela inzwa.
I-ISO elinye ithuluzi ongalisebenzisa ukwandisa noma ukunciphisa ukuzwela kwekhamera ukukhanya. Izilungiselelo ezisezantsi ze-ISO zivame ukukhiqiza izithombe ezingenamsindo ngaphandle kokusanhlamvu, kuyilapho izilungiselelo eziphakeme ze-ISO zivame ukwethula umsindo omningi esithombeni. Abathwebuli zithombe bavame ukuzama ukugcina i-ISO iphansi, njengoba iningi lithanda ukugcina umsindo uphume ezithombeni zazo, kepha kwesinye isikhathi kufanele ukhuphule i-ISO ngenxa yenhlanganisela yokukhanya okuphansi / ukunyakaza kwesihloko.
Enye ingxenye yesilinganiso sezithombe ngumthwebuli wezithombe. Kubalulekile ukuthi Umthwebuli wezithombe akakwazi ukulawula ikhamera kuphela, kodwa futhi nokusebenza nemvelo ezungezile, ikakhulukazi endle. Ungahle ubheke ukuthatha izilwane ezincane futhi ezizokubalekela lapho ubonwa khona, ngakho-ke kubalulekile ukuzilungiselela.
Isihluthulelo siwukuqonda okukuzungezile futhi wazi isihloko sakho. Umhlaba uphendulwa ingxenye enkulu, ngakho-ke uma uhamba ngendlela eyodwa, ungabikezela ukunyakaza kwezinye izingcezu. Iningi lezilwane zibalekela ingozi ebonwe ngendlela ethile, ngakho-ke uma usukulungele lo mjikelezo ngqo, unethuba elingcono lokuthwebula shot. Isibonelo, uma ufuna ukudonsa ihlumela lokugxuma kwexoxo, ubuyobe ulilungele ukuthi ligxume phambili, njengoba amasele angaqabuki ehlehlela emuva.
Kwesinye isikhathi udinga ukuba khona ukuze udonse ukunaka kwesihloko kukhamera. Ngezinye izikhathi kuyadingeka ukuba ube impukane odongeni futhi ube ngumuntu obukele esikhathini esimangazayo. Zombili lezi ziza ngokuqonda isikhashana nendawo ezikuzungezile. Isincomo sokusiza ngalokhu kuqonda sibheka lokhu Isihloko se-National Geographic. Kuzokusiza ukuthi ungene emgqondweni wezithombe ezinhle futhi uqinise ulwazi lwakho oluzungezile.
Umgomo wakho kufanele ube ukuzibeka endaweni efanele futhi ngesikhathi esifanele ukuze uthwebule leso sithombe esiphelele. Kuyadingeka ngempela ukuzizwa usesimweni esidlalayo phambi kwakho. Ukubona lapho ilanga likhona, hlobo luni lomthunzi oluthinta isithombe, ingabe kukhona ezinye izitshalo ngendlela yesici esiyisisekelo, kukhona izinto eziningi kakhulu / ezincane emfanekisweni, yizinto zonke okufanele zibhekwe lapho kudlula emaphaseji. Kungumsebenzi wakho njengomthwebuli wezithombe ukuqinisekisa ukuthi izinqumo ezenziwayo yizona ezifanele.
Amathuluzi wokuhlela isithombe
Photoshop kuyingqayizivele ngokuba namathuluzi amaningi namaqhinga okwenza isithombe sakho sibe ngobuciko. Cishe noma yisiphi isikhangiso somagazini, isithombe sokudubula, noma umkhankaso wokukhangisa sisebenzisa i-Photoshop ngenxa yezizathu eziningi. Uma ungazange ube nenhlanhla ngokwanele yokuzama ukusebenzisa i-Photoshop, nakanjani kufanele, kumahhala ngesivivinyo samasonto amabili, futhi ababuzi imininingwane yekhadi lakho.
Elinye ithuluzi elikhulu ongalisebenzisa ukuhlela izithombe zakho I-LucidPix. ULucid ungomunye wabaqambi abahamba phambili kubuchwepheshe be-3D obuqhutshwa ubuhlakani. Uhlelo lokusebenza lukaLucid, uLucidPix, lunikeza abadali indlela elula yokwenza izithombe ze-3D futhi zabelane ngayo kunoma iyiphi ipulatifomu yezokuxhumana. Kuyatholakala ngaphandle kwezindleko kuwo womabili amapulatifomu e-iPhone ne-Android, inqubo eyodwa ye-LucidPix eshintsha noma isiphi isithombe esijwayelekile ibe isithombe eshukumisayo se-3D.
Ungaguqula isithombe sakho se-3D esiguquliwe manje Ividiyo ye-MP4 or i-animated GIF usebenzisa uhlelo lokusebenza lweLucidPix, unikeza nokuphila okuningi kakhulu esithombeni sakho esimangalisayo. NgeLucidPix kwesinye isikhathi kungazizwa sengathi ubuyile kuleyo ndawo ubukele leso silwane sihamba endle. Akukho ukushoda kwezinketho uma kukhulunywa ngeLucidPix ngobuchwepheshe bokuhlela isithombe obusheshayo nobuhlungu.
Qiniseka ngokwazi ukuthi unamathuluzi, ulwazi kanye namakhono okukwazi ukudonsa izilwane eziningi ehlane. Gcina ukuhlakanipha kwakho ngawe futhi ucabange ngezimo ozifaka kuzo. Konke kuzosabela ngokuya ngezenzo zakho, noma ngabe ubona izilwane noma cha, ngakho-ke kubalulekile ukuthi kunombono othile wokuzibona wena uphumelele .
Ekugcineni, futhi okubaluleke, jabulela isipiliyoni. Lokhu kungaphandle okukhulu, indalo kaNkulunkulu, ubuhle bemvelo, noma yini ofuna ukuyibiza, ayikho into efana nayo, noma enhle, ngakho-ke yithathe. Manje wena, okungenani, wazi izithombe zasendle eziphakathi.